Fivondronan'ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara - Wikipedia
Fivondronan'ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara
(tonga teto avy amin'ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara)
Ny Fivondronan'ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara, izay hafohezina amin' ny hoe FFBBM, dia fiombonan' ny ireo endriky ny fiangonana batista miorina eto Madagasikara izay isan' ny atao hoe fiangonana protestanta sady ara-pilazantsara. Na dia iefa tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 1935 aza ny finoana batista dia tamin'ny taona 1997 no nananganana ny FFBBM ka ny tanjona tamin'izany dia ny hanorenana sy hampandrosoana fiangonana izay sady ara-pilazantsara no mpitahiry ny rakitry ny ela. Tamin'ny taona 2005 dia efatra ireo fiangonana batista mpikambana ao amin'ny FFBBM.
1 Tantaran'ny batisma eto Madagasikara
4 Vondrona batista hafa
Tantaran'ny batisma eto MadagasikaraHanova
Tonga teto amin' ny Nosy tamin'ny alalan' ny Misiona Biblikan'i Madagasikara tamin' ny taona 1932 ny finoana batista. Ny Miosiona Biblikan'i Madagaskara dia nipoitra avy tamin'ny London Missionary Society (LMS). Ilay misionera anglisy, atao hoe Brinley Evans, sy ny vadiny no nirahina tamin' izany. Ny trano fiangonana batista voaorina voalohany dia ny ao Ankadivato tamin' ny taona 1935, taona izay nanombohan'ny fampielezana ny finoana batista eto Madagasikara. Nody tamin'ny taona 1944 i Brinley Evans mivady. Novana anarana ka natao hoe "Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara" tamin'ny taona 1963 ny fiangonanana najoron'ny Misiona Biblikan'i Madagasikara . Tamin'ny taona 2006 dia efa nanana fiangonana miisa 55 sy mpino miisa 3 000 izy. Tamin'ny taona 2016 kosa dia nitombo izany ka nahatratra 327 ny isdan'ny fiangonana ary 8 902 ny isan'ny mpino.
Mahaleo tena amin'ny lafiny rehetra (fitantanana sy fombam-pivavahana) ny fiangonana batista biblika tsirairay isan-toerana, nefa izy rehetra dia miombona ao amin' ny Fivondronan' ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara (FFBBM) tarihin' ny Filan-kevi-pitantanan' ny FFBBM izay miara-mivory in-droa isan-taona miaraka amin' ny solon-tena isam-piangonana. Fidin' ny mpikambana ao amin' ny fiangonana tsirairay ny olona hatao mpitandrina ao amin' ny fiangonany. Nankalaza ny faha-80 taonany ny FFBBM tamin'ny taona 2013. Misy 65 ny fiangonana mikambana ao amin’ ny FFBBM.
Ny foto-pinoan' ny batisma eto Madagasikara dia ny fanambarana miorina amin' ny Soratra Masina (Baiboly); ka ny lehibe amin'izany dia amin' ny Trinite (Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina); ny maha olombelona an'i Jesosy Kristy, ny maha Andriamanitra azy, ny fiteraham-birijiny azy, ny fahafatesany, ny fitsanganany amin' ny maty sy ny fiaviany fanindroany; ny fahalavoan' ny olombelona; ny famonjena amin' ny alalan' ny fibebahana sy ny finoana, ny amin' ny fahaleovan-tenan' ny fiangonana mizaka tena, ny ordinansa na sakramenta roa (batisa anaty rano sy ny fanasan'ny Tompo), ary ny fitsanganan' ny tena amin' ny maty.
Vondrona batista hafaHanova
Tsy ny FFBBM ihany no vndrom-piangonana batista misy eto Madagasikara fa ao koa ny Fiangonana Batista Finoana, ny Fiangonana Batista ara-Pilazantsara, sy ny maro hafa.
Tranonkala ofisialy : https://batista-biblika.mg
Tranokala hafa : https://batistamalagasy.wordpress.com
Fiangonana Batista Biblika Ankadivato: http://www.batista-ankadivato.org/
↑ Blanchy Sophie, Rakotoarisoa Jean-Aimé, Beaujard Philippe, Radimilahy Chantal, Les dieux au service du peuple. Itinéraires religieux, médiations, syncrétisme à Madagascar, Karthala Editions, France, 2006, p. 102
↑ "Ny tantaranay" - Fivondronan'ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara
↑ William H. Brackney, Historical Dictionary of the Baptists, Scarecrow Press, USA, 2009, p. 360
↑ Baptist World Alliance, Statistics, bwanet.org, USA, nojerena tamin'ny 29 Septambra 2018.
↑ "Sanitation and hygiene in developing countries: A case study from Madagascar identifying and responding to barriers" in Overseas Developpement Institute
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivondronan%27ny_Fiangonana_Batista_Biblika_eto_Madagasikara&oldid=990561"
Dernière modification le 5 Mey 2020, à 15:13